सिद्धार्थको नि’धनपछि घरमै कै’द भइन् शहनाज
काठमाडौं : रियालिटी शो ‘बिग बोस १३’ विजेता सिद्धार्थ शुक्लाको हृ’दयघा’तका कारण महिना दिनअघि नि’धन भयो । सिद्धार्थको नि’धनपछि उनको परिवारसँगै फ्यान पनि अझै शो’धमा छन् ।
सिद्धार्थसँग विवाह गर्ने तयारीमा रहेकी शहनाज गिल यो शो’कबाट बाहिर आउन सकेकी छैनन् । केही समयअघि मात्र उनी काममा फर्कन लागेको समाचार सार्वजनिक भए पनि त्यो खबर गलत रहेको उनको परिवारले प्र’ष्ट्याइसकेका छन् ।शहनाजको एक ज्योतिष डा. नवनिधि ब’धावाका
अनुसार शहनाजले आफैंलाई घरमा कै’द गरेर राखेकी छन् ।
‘शहनाजले आफ्नो मुड फेर्नका लागि मेडिटेसनको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । योगा गर्दा उनलाई फाइदा हुन्छ । शहनाजको नम्बर २७ हो । सूर्य र
केतूको दशाका कारण शहनाजको मुडमा पटक पटक परिवर्तन हुनेछ’, ज्योतिषले भनेकी छन् ।नवनिधिले शहनाजका फ्यान र परिवारलाई सन् २०२२ सम्म अभिनेत्रीको हेरविचार गर्न आग्रह गरेकी छन् । आगामी दिनमा शहनाजका लागि निकै ख’राब समय रहने भएकाले पनि
शहनाजको गतिविधिप्रति ध्यान दिन उनले भनेकी छन् । उनका अनुसार अहिले शहनाजको परिवारको एक सदस्य २४ सै घण्टा उनीसँगै हुने गर्छिन् ।सिद्धार्थको नि’धनपछि शहनाज सामाजिक सञ्जालबाट टाढिएकी छन् । जसकारण पनि उनका फ्यानले उनको गतिविधिलाई नजिकबाट नि’याल्न पाएका छैनन् ।
२०७८ आश्विन ९, शनिबार प्रकाशित0Minutes 82 Views
काम गर्न नसकेपछि ‘दायित्व राज्यले लिनुपर्छ’ भन्दै पन्छिए धुर्मुस, रंगशाला निर्माण अ’लपत्र !
आज विश्वकर्मा दिवस, विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदै !